Qubanaha » Shariif Xasan iyo Guuleed oo Siyaada Adag soo wajahday.+Xog
Shariif Xasan iyo Guuleed oo Siyaada Adag soo wajahday.+Xog
Jabka siyaasadeed ee soo gaaray Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ,ayaa waxaa uu dhabar jab weyn ku noqonayaa ,siyaadda Shariif xasan Shiikh Aadan ee ku aadan in uu Soomaaliya ka noqdo Madaxweyne ,iyadoo maalmahaan ay guuleed iyo isaga ahaayeen saaxiibo dhanka siyaasada ah.
Maanta xubno ka tirsan barlamanka Galmudug oo ku shiray Magaalada Cadaado ,ayaa waxaa ay sheegeen in ay xilikii ka qaadeen Madaxweynaha Galmudug C/kariin xuseen Guuleed ,iyadoo guuleed uu goor dhaweyd shaaca ka qaaday in uu diiday wixii ka soobaxay barlamanka Galmudug.
Shariif Xasan ayaa waxaa uu aad taageero ugu heystay C/kariin guuleed waxaana lagayabaa in shariifka oo dadaal weyn ugu jira sidii uu u noqo lahaa madaxweyne ay hada soo waja heyso qal qal siyasadeed ,iyadoona bari la filaayo in uu gudoonka barlamanka Soomaaliya ku soo boxo Jawaari.
shariif xasan shiikh aadan ayaa waxaa uu ku jiraa xaalad aad u adag waxaana laga yabaa in uu is badal weyn sameyo waxaa ay wax walba ku xirantahay maalinta bari ah oo la doorandoono gudoonka barlamanka Soomaaliya oo ay u tartamayaan Xubno Digil iyo Mirifle ah ,iyadooan shariifka uu dadaal badan ku bxinaayo C/rashiid Xidig oo hadii uu guulesto ay ka dhigantahay in uu guuleystay shariif Xasan.
Madaxweynaha Diidday in Xilka laga qaaday Guuleed ayaa waxaa uu xulafo la ahaa muddo dheer madaxweynaha Soomaaliya xasan shiikh iyo Farax C/qaadir lakiin waxaa warka ay sheegayaan in ay kala furteen mudooyinkaan isagoona Guuleed ku xirtay Shariif Xasan .